Kugadziriswa uye nzvimbo yeAmazon Warehouses muSpain | ECommerce nhau
Amazon Iyo ndeimwe yemakambani ari kukurumidza kukura mumakore achangopfuura, uye hazvishamise, nekuti masevhisi aanopa anowedzera kukosha kukuru kune zvigadzirwa zvainotengesa. Asi chokwadi chekuti zviri nyore kumushandisi wekupedzisira kungoona zvigadzirwa pakombuta, wozogona kuhodha, zvinoreva a yakanyanya kudikanwa kwekugona kwekushandisa.
Kuti uwane izvi zvinodiwa, Amazon muSpain inoshandisa akateedzana edura ekuchengetera zvine hunyanzvi kuti akwanise kubata kurongedza kwezvigadzirwa uye kugadzira izvo zvichange zviri mumawoko ekupedzisira mutengi mukati memazuva ari pakati pe2 ne5 mazuva. AsiAripiko matura eAmazon kuSpain uye mashandiro avo anoshanda sei??
1 Ari kupi matura eAmazon kuSpain?
1.1 Imba yekuchengetera yeIllescas
1.3 Madrid Center
1.5 Nzvimbo nhatu muMartilles
2 Kushanda kwezvigadzirwa zvematura eAmazon kuSpain
2.1 Mashandiro anoita marobhoti
3 Kuzadzikiswa kubva kumatura eAmazon anowanikwa kune wese munhu
3.1 Zvakanakira zvigadzirwa zveAmazon
Ari kupi matura eAmazon kuSpain?
Imba yekuchengetera yeIllescas
Ngatitangei nekutaura nezvazvo imba yekuchengetera iri muIllescas, muSan Fernando de Henares, uko kune imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha dzekuSpain iri. Iyi imba yekuchengetera kudada kweAmazonsezvo iine mukana wekubata kusvika kumakumi mairi nemakumi maviri nemaviri emirairo mumaawa makumi maviri nemana chete, rinoita basa rinotyisa rekugadzirisa zvinhu. Iyi nhamba yakataurwa neiyo Amazon.com peji pachayo, iyo yakaratidza kuti zuva rekudiwa kukuru ndiDecember 182.
Chimwe chei matura anowanikwa neAmazon kuSpain iri muGetafe, uye iri muchinzvimbo chakakosha kugona kuzadzikisa kudiwa kwenzvimbo yepakati yeSpain. Nekudaro, nekuda kwemaitiro ekuwedzera eAmazon, yechipiri logistics Center ichaiswa mudunhu rimwe chete, mu Polígono de los Gavilanes.
Chimwe chei Matura eAmazon muSpain Inowanikwa muMadrid, uye yakagadzirirwa kukurumidza kusangana nezvinodiwa mudunhu redhorobha. Basa rayo guru ndere kukwanisa kuburitsa zvigadzirwa zvinozivikanwa nekukurumidza mudunhu. Asi handicho chete chitoro chemaitiro ayo muSpain, imwe yematura akagadzirirwa kutsanya kwevatengi ndiko kuri muBarcelona.
Imwe nzvimbo yezvigadzirwa iri padyo Barcelona ndeya Prat de Llobregat, imba yekuchengetera iri padyo neBarcelona airport, uye ndosaka iri yakarongedzwa kuti igone kuenda kune mirairo inofanirwa kusvika nendege. Imwe yemhando dzakatanhamara dzeiyi imba yekuchengetera ndeyekuti ine yepamusoro-soro robhoti tekinoroji.
Nzvimbo nhatu muMartilles
vamwe 3 logistics nzvimbo izvo zvakakosha kutaura ndezve Martilles, ane chikuru chigadzirwa ndiye anozvishandira. Inotevera ndiCastellbisbal, inova nzvimbo yezvigadziriso yakavhura mikova yayo muna 2016. Uye pakupedzisira, tichazotaura nezveSeville, iyo logistics centre yeguta guru reAndalusia, uye imba yekuchengetera iyi yakavakwa zvakanyanya kushandira nharaunda ino.
Kushanda kwezvigadzirwa zvematura eAmazon kuSpain
Kutaura nezve zuva rine kudiwa kukuru kwe zvigadzirwa kuburikidza neAmazon, iyo online chikuva inobata angangoita makumi matatu neshanu masekondi. Zvinoreva kuti pane basa rakawanda rekuita kuona kuti pasuru yacho yasvika kumutengi nenzira inogutsa. Uye chikamu chebudiriro ye amazon zvigadzirwa inowanikwa mukugadzirisa kwemaitiro akasiyana siyana.
Dzidziso huru iyo pasi payo inorongwa Kugadziriswa kweAmazon ndiko kweakarongeka mhirizhonga, fungidziro inotitaurira kuti hazvidi kuti zvinyorwa zvinyatsorongeka nenzira yekuti zvese zvakafanana zviri munzvimbo imwechete.
Pane zvakasiyana, marobhoti ari pamusoro pekuronga maodha vachishandisa algorithms mune izvo fungidziro ndeyekuti chigadzirwa chinofanira kunge chiri munzvimbo inowanikwa. Mukana wekutanga unounzwa nerudzi urwu rweimba yekuchengetera ndeyekuti mikana yekuvhiringidza chigadzirwa ishoma, sezvo isina kukomberedzwa nezvigadzirwa zvakafanana, asi zvakasiyana.
Uye imwe mukana wekuti iyo logistics system Maitikiro aya ndeokuti marobhoti ane basa rekutakura chigadzirwa kubva panzvimbo yachinochengeterwa kuenda mumaoko emushandi anoona nezve kurongedza chigadzirwa, maitiro aya anochengetedza anenge makiromita 1,2 ekufamba pamushandi, ayo anongoshandiswa chete kugona kuwana nzvimbo yechigadzirwa.
Mashandiro anoita marobhoti
Pfungwa yekutanga ndeyekuti iyi mhirizhonga yakarairwa ivepo, software yacho ine geolocation uye tagging system, iyo inobvumidza kuziva nzvimbo chaiyo yechimwe nechimwe chezvigadzirwa zvakasiyana mukati meimba yekuchengetera. Uye izvi zvakare zvinotendera kuti izivikanwe kana chimwe chezvigadzirwa ichi chichifamba, uye nekudaro zvichitevera trajectory yechigadzirwa.
Kunyangwe ari mushandi wemunhu anosarudza kuti zvigadzirwa zvitsva zvinosvika kuimba yekuchengetera zvakaiswa kupi, chinzvimbo chitsva ichi chinofanirwa kuratidzwa kurobhoti kana tarisa kodhi yechigadzirwa panzvimbo Mairi inowanikwa. Nenzira iyi, kana isu tichihodha chigadzirwa, robhoti inozokwanisa kuendesa pasina dambudziko rakakura.
Zvino, kana chigadzirwa chaiswa panzvimbo yekushandisa, munhu anoshanda ndiye achange achitarisira kurongedza chigadzirwa. Izvi zvinoreva kuti pasuru yacho yagadzirira kutumira. Iye zvino izvi zvinoiswa pabhandi rekutakura uko mamwe mafirita ane otomatiki anotarisira ronga mapakeji akasiyana zvinoenderana nehuremu hwavo, saizi uye mamwe maitiro, ikozvino kugona kuzvimisikidza nekambani pasuru iyo ichave nebasa rekuendesa chigadzirwa kumushandisi wekupedzisira.
Kuzadzikiswa kubva kumatura eAmazon anowanikwa kune wese munhu
Imwe yenyaya dzinonyanya kufarira vese vanoda tengesa zvigadzirwa zvako papuratifomu yeAmazon, ndeyekuti Amazon ine madhoo edura ayo akavhurwa. Kutenda neizvi chero mutengesi anogona kusaina kuAmazon logistics uye kuti ugone kutumira zvigadzirwa zvako kumatura avo, kuitira kuti kana odha yechigadzirwa ichi yagamuchirwa, iko kutumirwa kunoitwa zvakananga uchishandisa iyo Amazon logistics services.
Icho chokwadi chekuti Amazon inochengetedza iyo yekuendesa manejimendi yezvigadzirwa inopa akawanda mabhenefiti, pakati pavo kuti mutengi achagamuchira kutarisisa kwakananga kweimwe yekambani dzakagadzirira uye dzakashongedzerwa kwazvo pasi rose.
Zvakanakira zvigadzirwa zveAmazon
Imwe mukana wekuita kushandiswa kweAmazon zvigadzirwa ndeyekuti iwe unogona kuwana matatu mabheji ayo anoita kuti vatengi vafarire zvigadzirwa zvechitoro chako, nekuti nekuda kwemabheji e Prime, Inofambiswa neAmazon uye Tenga Bhokisi, vatengi vanozove nesarudzo yekutenga zvigadzirwa zvako.
Imwe yemabhenefiti akakosha ekushandisa izvi Amazon logistics services, ndiko kuti, nekupa zvinhu, unogona kutarisa kune mamwe mashandiro ebhizinesi rako, uchivimba kuti zvinhu zviri mumaoko akanaka. Pamusoro pekupa zvirinani sevhisi kune wekupedzisira mutengi, Amazon ichagadzirisawo vatengi.
Uye semukana wekupedzisira wekushandisa iyo maitiro ekugadzirisa nayo iyo Matura eAmazon muSpain ndeyekuti pane inoshanduka yekubhadhara modhi. Izvi zvinoreva kuti Amazon inoenderana nezvinodiwa semutengesi, kuitira kuti pasave nemari yekunyorera, kana chero mhando yechibvumirano chinokuita kuti ubhadhare mari. Asi, iyo inobhadharwa zvinoenderana nehurongwa hwe manejimendi manejimendi anoshandiswa.
Zvese zviri pamusoro zvinotiratidza nei Amazon ndiyo imwe yezvitoro zvepamhepo zvepamhepo mupasi rose, Zvakanaka, huzivi hwezvinhu uye nzvimbo zvinotibvumidza kupa zvakawanda munguva pfupi, uye kunyangwe hazvo kudyara mukuvandudza kwakatora nguva yakareba, pasina kana nekupokana kushoma kuti kwaive kwakakodzera, uye nekuda kweizvi ndezvekuti vashandisi vanogona kunakidzwa chaizvo zvese zvigadzirwa zvatinogona kufungidzira., uye zvese pamusuwo edzimba dzedu uye munyaradzo yeimba yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Matura eAmazon muSpain
Pilar Guimera Benito akadaro
Handizive kana ndiri kunyora munzvimbo kwayo….
Mangwanani ano (21.10.2019) na13.39 pasuru yangu yaendeswa kune «muvakidzani» Rubén Locutorio pasi pevhu 7… handizive kuti muvakidzani uyu ndiani uye ndiani akakupa mvumo yekuendesa YANGU package kune »muvakidzani».
Order nhamba EA0010726018.
Kutaura kwangu hakuna kugutsa kwazvo kwauri. Ini ndakatsamwa kwazvo uye nebasa rakaipa revanouya navo varume. Nei nhare mbozha yakapihwa?, Vanga vaswera vasina kusiya vakamirira pasuru. Iye zvino unogona kuenda kunotsvaga Ruben iyi….
Pindura Pilar Guimera Benito
eCommerce Musangano Live, chiitiko chausingakwanise kupotsa